OMN: Yeroo ammaatti xiyyeeffannoon qabsoo Oromoo malirratti ta’uu qaba? – Kichuu
HomeAfaan OromooTVOMN: Yeroo ammaatti xiyyeeffannoon qabsoo Oromoo malirratti ta’uu qaba?
AGM:Isayyaas Afwarqii Ani Tigraayin Hin Dhoofne Wayyaanen Sobaan Maqaa Naballeessiti Jedhee Waakkate
“Yoo Gara Bilisummaatti Deemta Ta’e Jaarmiyaa Jalatti Ijaaramii Deemi!”
Kello Media irratti
WBOn humna dabalataa eebbisiisuu akkuma itti fufetti jira. Ilmaan Oromoo: humni dabalataa kun dhiheessii dabalataa barbaada. Nyaata, uffata, qoricha, qawwee, rasaasa, kkf. Kanaafuu WBO HAA TUMSINU!! Har’uma. Hubadhaa, Bilisummaan tolaan hin dhuftu.
Sadaasa 11/2020 oduu tarkaanfii Waraana Bilisummaa Oromoo kan zoonii lixaa fi zoonii kibbaa caqasaa.
Maadhee Dinni Itti Gargaarama Jenne Barbadeessine: Humna Qilleensa Itiyoophiyaa
Miseensota humna addaa naannoo Amaaraa, Danaashaa, Naannoo daangaa naannoo Amaaraa fi Tigraay, Sadaasa 9, 2020
WAASHINGITAN, DIISII —(voaafaanoromoo)- Mootummaan Itiyoophiyaa Juntaa jedhee kan waamaa jiru hogganno ABUT kan otti gargaaramuu kuufama boba’aa, meeshaalee waraanaa fi kanneen biroo qiyyaafata jala jiran Jettonni waraanaa kan Itiyoophiyaa barbadeessuu ajajaa kan ta’an meejar Jeneraal Yilmaa Mardaasaa sabaa himaa biyya keessaaf ibsanii jiru.
Jettonni keenya sodaa tokko malee iddoo barbaadamee haleelanii yoo uummanni siviliin kan miidhamu ta;e immo meeshaa ituu hin dhukaasiin fudhanii deebi’uu jedhan.
Humnootii badii kan ittiin jedhan ka Tigraay hanga seera duratti dhiyaataniitti akka barbaachiseetti samii irraa haleellaan akka itti fufuu dubbachuu isaanii Mallaskaachoo Ammahaa gabaasee jira.
Gama kaaniin qondaaltonni waraana Itiyoophiyaa kan sadarkaa adda addaa 17 to’annaa jala ooluu isaanii polisiin federaalaa ibsee jira.
Waaltaan ajaja kaabaa Maqalee jiruu fi waaltaan ajajaa kan giddu galeessaa inni Finfinnee jiru qunnamtiin qaban akka cituu gochuuf ABUTf haala mujeessan jechuun shakkamanii qabaman.
Photo Abiyyi uffata waraana uffatee jiru sana akka waanta inni amma qaamaan lola Tigiraay irratti hirmaata jiruutti afarfamaa jiru soba. photon sun kan durii bara Isaayaas waliin achitti wal argan malee kan amma akka hin taane photo 2ffaa irra jiru ragaadha.
Sobnii daangaa dhabee bara Pp.